दाङ विशेष Archives - Page2of3- Rapti Press
२७ मङ्सिर २०७७, 10:46 am
घोराही, २७ मंसिर । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले तुलसीपुर विमानस्थालमा निर्माण कार्य प्रारम्भ हुन थालेको इन्धनडिपो समयमै सम्पन्न हुने बताउनुभएको छ । शनिवार विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै महराले इन्धनडिपो स्थापना पछि दाङमा हवाई सेवा पूर्णरुपमा नियमित…
१८ मङ्सिर २०७७, 12:34 pm
चेतना अनलाइन घोराही, १८ मंसिर । दाङको घोराही नवलपुर स्थित मितेरि अस्पतालमा हाडजोर्नीको अप्रेसन शुरु भएको छ । एक हप्ता अघि देखि मितेरीमा हाडजोर्नीको अप्रेसन सेवा शुरु भएपछि १० जना व्यक्तिको अप्रेसन गरिएको अस्पतालका सञ्चालक…
१८ मङ्सिर २०७७, 2:27 am
चेतना अनलाइन घाेराही, १८ मंसिर । दाङकाे घाेराही न्युरोड स्थित विजि माेबाइल सर्भिस सेन्टरले चेतना अनलाइनलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेकाे छ । विजि माेबाइलका सञ्चालक गगन केसीले चेतना अनलाइन का सम्पादक पाण्डव शर्मालाई स्वास्थ्य सामग्री…
११ मङ्सिर २०७७, 12:08 pm
चेतना अनलाइन तुलसीपुर, ११ मंसिर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ बराहाखुटीका खुसलराम पौडेललाई गोलीका छर्रा लागेको स्थानबाट प्रहरीले बन्दुक बरामद गरेको छ । पौडेल फेला परेको अमिलियाको चाउखोला भन्दा ५ मिटर टाढा एक थान…
११ मङ्सिर २०७७, 9:56 am
पाण्डव शर्मा घोराही । मिस नेपाल २०२० को प्रतियोगितामा फइनल चरणमा पुग्नुभएकी दाङकी चेली डा. निगाता केसीले आँफूले समाजका लागि केही योगदान गर्न चाहेको बताउनुभएको छ । उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा एसीड आक्रण भई पीडित…